Vaovao - Tsy fako, tsy te: firy ny fako fonosana be loatra?
Ilaina ny fonosana: alao an-tsaina fotsiny izao tontolo izao tsy misy an'io.
Nisy foana ny karazana fonosana ary hisy foana, saingy misy fomba ve hampijanonantsika ny habetsahan'ny fandotoana sy ny fako vokarina amin'ireo filan'ny fiainana ireo? Aiza no ahitantsika ny andalana amin'ilay fanekena hanaiky ny zava-misy ireo fako fonosana eo amin'ny fiainantsika?
Ny iray amin'ireo fitaovana famonosana indrindra dia ny famonosana izay mety misy poizina lehibe vokarina. Tena maharitra ihany koa izy io ka manasarotra ny famoahana azy raha tsy voaverina. Ary, ny marina, tsy ny orinasa rehetra no madiodio, fa tsy ny fanariana ny fako fonosana ataon'ny orinasa antoko fahatelo. Ahoana raha toa ka maro amin'ireo mpanamboatra sy mpaninjara ireo no manomboka manamboatra ny plastika, ny taratasy ary ny baoritra? Tsy hamonjy vola fotsiny izy ireo fa hanampy amin'ny famonjena ny tontolo iainana amin'ny loto maloto.
Na mety nahita fomba hafa azo ahodina amin'ny fonosana miharo sy fonosana hafa izay mamokatra fako betsaka indrindra izy ireo. Ny azo soloina dia mety ho adiresy palletized izay misoroka ny fivezivezena amin'ny vokatra rehefa tehirizina amin'ny paleta. Ny sasany amin'ireto dity ireto dia mety ho mora vidy kokoa noho ny famonosana. Izy ireo koa dia mety hamokatra fandotoana kely kokoa amin'ny fanamboarana aza. Ny tadin'ny bungee azo ampiasaina dia mety hanao ny tetika hanoloana ny fonosana miharo raha mbola mitazona ny vokatra amin'ny toerany. Misy sombin-javatra manala baraka rehefa lena. Tsara ho an'ny tontolo iainana izany, saingy mety tsy dia tsara loatra amin'ny fandefasana entana na fitehirizana.
Na dia toa ara-tontolo iainana aza ny fanodinana ny fako dia tsy maintso tanteraka izy io. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny taratasy sy ny baoritra dia afangaro amin'ny rano ireo taratasy mba hamoronana pulp toy ny zavatra. Manamontsina ny kofehy izany mba hampatanjaka ireo akora namboarina, ampidirina ao anaty fangaro pulp miaraka amin'ireo akora simika hafa izay manala ny loto.
Raha tsy vitanao ny mamerina mametaka ny fonosanao dia manandrama mividy fitaovana mora simba ka afaka simba mora kokoa rehefa ariana na mahita vokatra azo ampiasaina imbetsaka, toy ny airbag sy ny voanjo fonosana. Ny fampihenana ny fako fonosana dia tokony ho laharam-pahamehana ho an'ireo orinasa mamokatra betsaka amin'izany. Indraindray dia mety handany fotoana sy handreraka, nefa, amin'ny farany, Misaotra anao ny Reny Natiora.